HomeDASTUURKA PUNTLAND 2012 PDF
Oday Faroole ayaa dastuuurka ka qaybgalay munaasabad xariga looga jaray xarunta cusub ee Wasaaradda Maaliyadda Puntland, Garoowe. Madaxweyne Dadtuurka wuxuu fuliyaa hawlaha Madaxweynuhu u wakiisho oo aan ka baxsanayn hawlaha Madaxtooyada. Dhammaan Saraakiisha iyo shaqaalaha dawladdu waxay xilalkooda u gudanayaan si waafaqsan mabaadiida soo socota:. Sharciga ayaa qeexaya duruufaha iyo habraaca lagu xaddidi karo xaqa shakhsiga ee la xiriira hantidiisa. Haddii ay Xukuumaddu dhacdo, Madaxweynuhu wuxuu bil gudaheed Golaha Wakiillada ku horgeynayaa Punhland cusub si loo ansaxiyo.
Midnimada dhulka Puntland waa muqaddas, lama kala qaybin karo, lagumana xadgudbi karo. Dhismaha Ururrada Dhallinyarada iyo Barbaarintooda waxaa qeexaya xeer gaar ah. Inta aan la gudo gelin doorashooyinka waa inuu jiro sharci gaar ah oo lagu hagayo arrin kasta oo la xariirta doorasho dimuqaraadi ah.
Qaab-dhismeedka, Laamaha, xuduudaha awoodaha iyo xilgudashada Garsoorka waxaa xadidaya sharci ay Xukuumaddu horgeyso Golaha Wakiillada. In uu guddi magacaabi karo si uu gacan ugu helo xil-gudashadiisa. Xeer gaar ah ayaa nidaaminaya waxbarashada gaarka ah.
Bannaanbaxyada waxaa lagu joojin karaa sababo lid ku ah Diinta Islaamka, caafimaadka, anshaxa, amniga iyo xasilloonida dalka. Ugu badnaan toddobo 7 xisbi ayaa doorashada ugu horreysa ka qayb gelaya. Markii Xukuumad ama Wasiiro cusub la horgeeyo Golaha Wakiillada, waa in ay ugu badnaan laba toddobaad gudahood ku ansixiyaan, haddii taasi dhici weydo waxaa 0212 qaadanayaa in sharciyan ay ansaxiyeen.
Xafiiska uu qoraalka cabashadu u socdo waa inuu ka jawaabo 45 beri gudahood. Muddada xilhaynta Difaacaha Xuquuqda Aadanahu waa shan sano dibna waa loo soo dooran karaa. Dawladdu waxay ilaalinaysaa awoodda wax-gadashada ee dadweynaha, gaar ahaan kuwa danyarta ah. Haddii ay dhacdo xaaladda ku xusan faqradda 4aad ee qodobkan, Golaha Wakiilladu waxa uu 30 maalmood gudahood puntlanv soo dooranayaa Madaxweyne ku-xigeen cusub.
Qaabka saami qaybsiga khayraadka dabiiciga ah ee Puntland waxaa qeexaya xeer gaar ah oo uu Golaha Xukuumaddu u gudbinaayo Golaha Wakiilada si uu u ansixiyo.
Mashruuc sharci ee ku dastuura cashuur, kharashka dawladda, difaaca dalka ama amniga, muwaadiniintu ma soo jeedin karaan. Puntland waxay ku dhaqmaysaa hannaanka mabaadiida baahinta maamulka. Maxkamadaha Dastukrka iyo xeer-ilaaliyaashooda waxaa nidaamiya xeer gaar ah. Qofka maxbuuska ah waxaa lagu dhaqayaa xuquuqda caalamiga ah ee maxaabiista. Sharci iyo xeer-hoosaadyo u gaara ayaa caddeyn doona xadaynta xaqa dhaq-dhaqaaqa.
Shaqaaluhu pjntland ay xaq u leeyihiin in ay cabashadooda ku muujiyaan bannaanbax ama shaqo-joojin si xeerka waafaqsan. Madaxweynuhu wuxuu soo saaraa xeer by-law qeexaya in la fuliyo shuruucda Golaha Wakiilladu gudbiyeen. Carruur waxaa loola jeedaa qof kasta oo siddeed iyo toban sano 18 ka yar, xagga Shareecadana waa sida ay qabto. Ku- Xigeennada Garyaqaanka Guud. Saxaafadda iyo warbaahinta xorta ahi waa ay ka madaxbannaan yihiin faragelin dawladeed, waxayna u hoggaansamayaan sharciga oo keliya.
Sharciga ayaa ka sarreeya qof kasta. Many people tend to harbor the notion that crises in far-off regions thousands of miles away stand beyond their reach of influence.
Habka siyaasadeed ee Dawladda Puntland wuxuu ku saleysan yahay mabaadiida hogaamineed ee:. Dawladdu waxay ahmiyad gaar ah siineysaa daryeelka iyo barbaarinta dhallinyarada oo ah hogaamiyaasha dalka ee berrito, waxayna u hawlgalaeysaa: Garsoorku markuu hawlihiisa fulinayo, wuxuu xor ka yahay Golayaasha Xeer-Dajinta iyo Fulinta, waxaana haga Dastuurka iyo shuruucda kale.
Qofna looma dhiibi karo arrimo siyaasadeed awgood extradition. Hawlahaas waxaa nidaaminaya xeer gaar ah oo ay Xukumaddu dusha ka ilaalineyso. Waa reebban tahay in xafiisyada dawladda loo isticmaalo ujeeddooyin siyaasadeed iyo dano gaar ah. Musharraxa jagada Madaxweynaha ama Madaxweyne ku-xigeenka waxay ka imaan karaan Golaha Wakiillada iyo dadweynahaba. Khat smuggling case in Va. Hawlwadeennada dawladda isma sharrixi karaan haddi aanay iska casilin xilalka ay hayaan.
Waa madaxa fulinta Dawladda Deegaanka, wuxuuna isku xiraa maamulka Degmada dastujrka kan Gobolka. Dezmonde help and support center. In uu wakiil uga noqdo Dawladda Puntland maxkamadaha hortooda markii ay jirto dacwad ay dawladdu dhinac ka tahay iyo mar kastoo dawladdu galeyso heshiis ay wax isaga gadeyso ama ay ku gadaneyso hanti maguurto ah.
Diin aan tan Islaamka ahayn laguma faafin karo dalka Puntland. Guddiga Doorashada Puntland wuxuu leeyahay awoodaha iyo xilalka soo socda: Garyaqaanka Guud wuxuu Madaxweynaha ka saxiixaa qawaaniinta labada gole isku raacaan, kuna soo saaraa Faatinta Rasmigas ah ee Dawladda si loogu dhaqmo.
Shaqaalaynta, dallacsiinta iyo ruqsaynta shaqaalaha degmada. Dejinta qorshaha horumarinta degmada, hirgelintiisana ay la kaashadaan maamulka dhexe ee Puntland. Muwaadin kasta wuxuu Maxkamadda weydiisan karaa in ay sidaas yeesho, isagoo arjigiisa ku xusaya sababaha cabashadiisa. Qof kasta xaq ayuu u leeyahay inuu waxbarasho helo.